टेलिकमको लापरबाहीले लुटिए ग्राहक, अबको शिकार कतै तपाईं त होइन ? « Tech News Nepal
टेलिकमको लापरबाहीले लुटिए ग्राहक, अबको शिकार कतै तपाईं त होइन ?
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट आदिलाई पासवर्डले मात्र पर्याप्त सुरक्षा दिनसक्दैन भनेरै टु स्टेप भेरिफिकेसनका लागि मोबाइल नम्बर राख्ने गरिन्छ । यसरी मोबाइलमा आउने ओटीपी राखेर मात्र अकाउन्ट लगइन गर्न सकिने अभ्यास विश्वव्यापी मान्यताकै रुपमा विकास भइसकेको छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार नियामकले दिएको निर्देशन नमान्ने र फोटो कपीका आधारमा सिमकार्ड दिनु प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा हो । यस विषयमा प्राधिकरणबाट अध्ययन हुने र आवश्यकता अनुसारको कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाइने उनको भनाई छ ।